1 Makoronike 12:1-40
12 Ava ndivo vakasvika kwaiva naDhavhidhi kuZikragi+ paakanga asati ava kukwanisa kufamba akasununguka nokuda kwaSauro+ mwanakomana waKishi; uye vaiva vamwe vevarume vaiva nesimba,+ vaibatsira muhondo,
2 vaiva nouta, uye vaikwanisa kukanda matombo+ kana miseve+ nouta+ vachishandisa ruoko rworudyi uye vachishandisa ruoko rworuboshwe.+ Vaiva hama dzaSauro, vokwaBhenjamini.
3 Mukuru wacho aiva Ahiezeri naJoashi vanakomana vaShemaa muGibhiya,+ naJezieri naPereti vanakomana vaAzmavheti,+ naBheraka naJehu muAnatoti,+
4 naIshmaya muGibhiyoni,+ mumwe murume aiva nesimba pakati pevane makumi matatu+ uye aitarisira vane makumi matatu; uye Jeremiya naJahazieri naJohanani naJozabhadhi muGedhera,+
5 Eruzai naJerimoti naBheariya naShemariya naShefatiya muHarifi,
6 Erikana naIshiya naAzareri naJoezeri naJashobheyamu, vaKora,+
7 naJoera naZebhadhiya vanakomana vaJerohamu wokuGedhori.
8 Kwaiva nevamwe vevaGadhi vakazvitsaura, vakaenda kudivi raDhavhidhi kunzvimbo yakaoma kusvika yaiva murenje,+ varume vaiva vakashinga, vaiva nesimba, varume veuto rehondo, vaigara vakagadzirira nhoo huru nepfumo refu,+ vaiva nezviso zvakaita sezveshumba,+ uye vaimhanya semhara dziri pamusoro pemakomo.+
9 Ezeri ndiye aiva mukuru, Obhadhiya ari wechipiri, Eriyabhi ari wechitatu,
10 Mishmana ari wechina, Jeremiya ari wechishanu,
11 Atai ari wechitanhatu, Erieri ari wechinomwe,
12 Johanani ari wechisere, Erizabhadhi ari wechipfumbamwe,
13 Jeremiya ari wechigumi, Makibhanai ari wechigumi nomumwe chete.
14 Ava vaiva vevanakomana vaGadhi,+ vakuru veuto. Muduku wacho akanga akaenzana nevane zana, uye mukuru wacho nevane chiuru.+
15 Ava ndivo vakayambuka Jodhani+ mumwedzi wokutanga parwakanga rwakafashamira mahombekombe arwo ose,+ vachibva vadzinga vose vaigara mumapani, kumabvazuva nokumavirira.
16 Vamwe vanakomana vaBhenjamini naJudha vakasvika kunzvimbo yakaoma kusvika,+ kwaiva naDhavhidhi.
17 Dhavhidhi akabva abuda, akasangana navo, akavapindura kuti: “Kana mauya kwandiri norugare+ kuzondibatsira, mwoyo wangu uchabatana nemi.+ Asi kana mauya kuzonditengesa kumhandu dzangu, ini maoko angu asina chakaipa,+ Mwari+ wemadzibaba edu ngaazvione, azvigadzirise.”+
18 Mudzimu+ waMwari wakafukidza Amasai, mukuru wevane makumi matatu akati:
“Tiri venyu, haiwa imi Dhavhidhi, uye tinemi,+ haiwa imi mwanakomana waJese.
Rugare, rugare ngaruve nemi, uye rugare ngaruve neari kukubatsirai,
Nokuti Mwari wenyu akubatsirai.”+
Naizvozvo Dhavhidhi akavagamuchira, akavaita vamwe vevakuru vevarwi.+
19 Kwaiva nevamwe vokwaManase vakatizira kuna Dhavhidhi paakauya nevaFiristiya+ kuzorwa naSauro; asi haana kuvabatsira, nokuti madzishe akabatana+ evaFiristiya akarangana, akamudzinga, achiti: “Achatizira kunashe wake Sauro, misoro yedu ikava pangozi.”+
20 Paakasvika kuZikragi,+ Adnaa naJozabhadhi naJedhiyaeri naMikaeri naJozabhadhi naErihu naZiretai vokwaManase, vakuru+ vezviuru zvokwaManase, vakatizira kwaari.
21 Ivo vakabatsira Dhavhidhi kurwisa boka revapambi,+ nokuti vose vaiva varume vane simba,+ vakashinga, uye vakava vakuru muuto racho;
22 nokuti zuva nezuva vanhu vakaramba vachiuya+ kuna Dhavhidhi kuzomubatsira, kusvikira rava boka guru,+ seboka raMwari.+
23 Uku ndiko kuwanda kwevatungamiriri vevaya vakanga vakagadzirira kurwa vakauya kuna Dhavhidhi kuHebroni+ kuzomupa umambo+ hwaSauro maererano nezvakanga zvarayiwa naJehovha.+
24 Vanakomana vaJudha vaitakura nhoo huru nepfumo refu vaiva zviuru zvitanhatu nemazana masere, vakanga vakagadzirira kurwa.
25 Pavanakomana vaSimiyoni, varume vaiva nesimba vakashinga veuto vaiva zviuru zvinomwe nezana rimwe chete.
26 Pavanakomana vevaRevhi, zviuru zvina nemazana matanhatu.
27 Jehoyadha ndiye aiva mutungamiriri+ wevanakomana vaAroni,+ uye aiva nezviuru zvitatu nemazana manomwe.
28 Uyewo Zadhoki,+ jaya raiva nesimba, raiva rakashinga, neimba yemadzitateguru aro, vaiva vakuru makumi maviri nevaviri.
29 Pavanakomana vaBhenjamini,+ hama dzaSauro,+ paiva nezviuru zvitatu, uye kusvikira panguva iyoyo vakawanda vavo vairamba vachinyatsorinda imba yaSauro.
30 Pavanakomana vaEfremu paiva nezviuru makumi maviri nemazana masere, varume vaiva nesimba+ vakashinga, varume vaiva nomukurumbira, maererano nedzimba dzemadzitateguru avo.
31 Pahafu yedzinza raManase+ paiva nezviuru gumi nezvisere, vakanga vakasarudzwa nemazita kuti vauye kuzogadza Dhavhidhi kuti ave mambo.
32 Pavanakomana vaIsakari+ vaiziva kutsauranisa nguva+ kuti vazive zvaifanira kuitwa nevaIsraeri,+ paiva nevatungamiriri vavo mazana maviri, uye ndivo vairayira hama dzavo dzose.
33 VokwaZebhuruni+ vaya vaienda kuhondo, vaigadzirira kurwa vaine zvombo zvose zvehondo, vaiva zviuru makumi mashanu, uye vaidirana vachienda kuna Dhavhidhi vasina mwoyo miviri.
34 VokwaNaftari+ vaiva nevakuru chiuru, uye vaiva nezviuru makumi matatu nezvinomwe zvaiva nenhoo huru nemapfumo.
35 KuvaDhani kwaiva nevaigadzirira kurwa vane zviuru makumi maviri nezvisere nemazana matanhatu.
36 VokwaAsheri+ vaya vaienda kuhondo kuti vagadzirire kurwa vaiva zviuru makumi mana.
37 Mhiri kwaJodhani,+ kuvaRubheni nevaGadhi nehafu yedzinza raManase vaiva nezvombo zvose zveuto rehondo kwaiva nezviuru zana nemakumi maviri.
38 Vose ava vaiva varume vehondo, vaidirana pamwe chete kunorwa; uye vakauya kuHebroni nomwoyo wose+ kuzogadza Dhavhidhi kuti ave mambo wevaIsraeri vose; uyewo vamwe vaIsraeri vose vaiva nomwoyo mumwe wokugadza Dhavhidhi kuti ave mambo.+
39 Vakaramba vari ipapo vaina Dhavhidhi kwemazuva matatu, vachidya nokunwa,+ nokuti hama dzavo dzakanga dzavagadzirira.
40 Uyewo vaya vaiva pedyo navo, kusvikira kwaIsakari+ naZebhuruni+ naNaftari,+ vaiuya nezvokudya zvakatakurwa nembongoro+ nengamera nemanyurusi nemombe, zvokudya zvefurawa,+ makeke emaonde akasvinwa+ nemakeke emazambiringa akaomeswa,+ newaini+ nemafuta+ nemombe+ nemakwai+ zvakawanda, nokuti pakati paIsraeri paiva nokufara.+